एउटा काम गर्दै जाँदा गल्तीका कारण अर्कै नतिजा निस्कियो के गर्ने ? कहिलेकाही गल्तिहरुले कामलाइ सहज बनाएको पनि उदारहरण छ । भौतिकशास्त्री विलहेल्म रोन्टजेनले अर्कै काम गर्दागर्दै एक्स–रे आविष्कार गरेका थिए । उनी क्याथोडिक रे ट्युब बनाउन खोजिरहेका थिए । कामकै सिलसिलामा ट्युबबाट आएको ज्योति अपारदर्शी कपडामा ठोक्किएको देखेपछि उनमा आश्चर्यको सीमा रहेन । जतिबेला ...
मिर्गौलाको पत्थरी बारे जानकारी
मिर्गौलाको पत्थरी एकपटक शल्यक्रिया गरेपछि पुन बल्झिने भन्ने सुनेको छु । यो के हो ? यसबारे सम्बन्धित चिकित्सकबाट जानकारी गराइदिनुहोला । कान्ति, नेपालगञ्ज डा.संजय खड्गी सिनियर कन्सल्टेन्ट युरोलोजिष्ट मिर्गौलामा पत्थरी हुनमा ८० प्रतिशत कारण व्यक्तिको आफ्नो रसायनिक प्रक्रियामा भर पर्छ । २० प्रतिशत कारण पानी कम पिउने, वंशाणुगत, प्याराथाइरोइड ग्रन्थीको बृद्धि, लामो समयसम्म झाडापखाला, जन्मजात ...
प्रोफेसर डा. दिव्या सिंह, नेफ्रोलोजिस्ट एण्ड ट्रान्सप्लान्ट फिजिसियन, शिक्षण अस्पताल नेपालमा प्रत्येक वर्ष फागुन १० गते विश्व मिर्गौला दिवस मनाइन्छ । मिर्गौला रोगको सम्भावना धेरै भएकाले यसको उपचारमा सबैको पहँुच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अहिले विभिन्न काम भैरहेको छ । डा. दिव्या सिंह शाहका अनुसार मानव शरीरको अत्यावश्यक अंग मिर्गौला एउटा मात्र भए पनि मानिस ...
कोलेस्ट्रोल कम गर्ने खोप तयारः मुसामा सफल
असार काठमाडौँ | वैज्ञानिकले मुटु सम्बन्धी रोगको जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको कोलेस्ट्रोल कम गर्ने खोपको मानिसमा परीक्षण गरिरहेका छन् । मुसामा गरिएको परीक्षण सफल भएपछि वैज्ञानिकले कोलेस्ट्रोल कम गर्ने खोपको मानिसमा परीक्षण सुरु गरिएको हो । अस्ट्रियाको भिएनामा रहेको मेडिकल युनिभर्सिटी अफ भिएनाका अनुसन्धानकर्ताले अहिले ७२ जनामा सुरक्षित तरिकाले खोपको परीक्षण गरिरहेका छन् ...
डाइबेटिज रोगका लागि भगवानको वरदान हो यो फल, केही महिनामा हुन्छ फाइदा पछिल्ला दिनमा मानिसको व्यस्त जीवनशैली र अस्वस्थ्य खानपानका कारण मानिसमा विभिन्न खालका रोगहरु लाग्ने गरेका छन् । यस्ता रोगहरु बढ्नुमा मानिसको विलाशी जीवनशैली व्यायामको कमी आदीका कारणले मानिसमा रोग बढीरहेको छ । जसका कारण मधुमेह, हर्ट अट्याक, किड्नी सम्बन्धी रोगीको संख्या पछिल्ला ...
घटना १ – रघुले आफ्नी प्रेमिका जुनुसँग विबाह गरे । विबाहको दोस्रो दिन चाहिँ उनीहरुले यौनसम्पर्क गरे । तर यौन सम्पर्क गर्ने ठिक्क तयारी हालतमा नै उनको वीर्य स्खलन भएर तन्नामा पोखियो । त्यसले उनलाई निकै खल्लो भयो । त्यस रात फेरी यौनसम्पर्क गर्ने आँट गरेनन् । भोलीपल्टको कोशिसमा भने योनीमा लिङ्गले छुने वित्तक्कै सबै ...
क्यान्सरका शुरुमा देखिने यी ५ लक्षण
क्यान्सर गम्भिर प्रकारको रोग हो । जुनसुकै क्यान्सर लागेपनि पैसा र शरीर दुवैको क्षति हुन्छ । तर क्यान्सरलाई बेलैमा पहिचान गर्न सकियो भने रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ । क्यान्सरका लक्षण देखिए भने पनि आत्तिइ हाल्नु हुँदैन । तर नियमितरुपमा जाँच र चिकित्सकको परामर्स भने लिनु पर्छ । हरेक जसो क्यान्सरमा देखिने ५ लक्षण यहाँ प्रस्तुत ...
मुख-मैथुन (oral sex) कति ठिक कति बेठिक ?
एक व्यक्तिको यौन अङ्ग अर्को व्यक्तिको मुखको सम्पर्कमा ल्याई गरिने यौन क्रियाकलापलाई नै मुखमैथुन अर्थात् oral sex भनिन्छ। कतिपय व्यक्तिका लागि यो निकै सुखदायी तथा आकर्षक हुन्छ भने कतिका लागि एकदमै विकर्षक। नेपालमा राम्रोसँग अध्ययन हुन बाँकी रहे पनि मुखमैथुनबाट यौन आनन्द पाउन रुचाउने व्यक्ति वा जोडीहरू यथेष्ट मात्रामा भएका उदाहरण हाम्रो सम्पर्कमा आउँछन्। मानव ...
नेपालमै सम्भव सर्पले टोकेको औषधि ?
काठमाडौँ, १६ असोज । समयमै औषधोपचार नपाउँदा नेपालमा बर्सेनि सयौँ मानिसले सर्पको टोकाइबाट ज्यान गुमाउने गरेका छन् । यस्तो समस्या विशेषगरी तराईका जिल्लामा बढी देखिने गरेको छ । तर, अब सर्पदंशको औषधि नेपालमै सम्भव देखिएको छ । नेपालमै सर्पदंशको औषधि उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहनुभएका सर्पविद् लक्ष्मीप्रसाद फुयाँलले बताउनुभयो । ‘एन्टिस्नेक भेनम सेरुम ...
डिप्रेशनबाट जोगिने तरिका
काममा सक्रियः धेरैमा डिप्रेसनको साझा कारण पर्याप्त रुची वा गतिबिधिको अभाव हो । जतिखेर पनि दिक्क मान्ने गर्नाले डिप्रेसन बढ्दै जान्छ । शारिरक स्वास्थ्य जस्तै मानसिक स्वास्थ्यमा पनि रुची बढाउनु र विभिन्न गतिविधिमा संलग्न हुनु निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले आत्मसम्मान र खुशी प्रदान गर्छ । हरेक कुरामा रुची राख्दा सन्तुष्टि र आफ्नोे बारेमा राम्रो ...